Kuwa kale - Noti Caballos | Fardaha Noti
Doorashadan, waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ay tahay inuu ku jiro baloogga laakiin waa maxay laguma meelayn karo qayb gaar ah. Waxaan ka hadlaynaa kuwa kale Faahfaahinta oo mararka qaar aanan garanayn meel aan ku raaxaysanno.
Tusaale ahaan sheeko ama filim la xiriira fardaha, o xitaa qaar geed geedo timireed oo ka mid ah danaha maxalliga ah ama qaran ee xiisaha leh iyo dheer iwm. Inay boos ku leedahay meeshan si ay inbadan uga dhammaystiran tahay guud ahaan.
Kuwa kale waxaan ku raaxeysan karnaa wax kasta oo aan u maleynay inaynaan ku soo dari karin qeybaha kale. Ha iloobin in macluumaadku yahay awood iyo in si buuxda loogu raaxeysto xayawaanadan ma joojin karno inaan nafteena ku wargelinno.
Fardaha carruurtu ku ciyaaraan, waxay ahaayeen, da 'kasta, mid ka mid ah waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ee caadiga ah. Waxaa jira guryo badan ...